Itobiya oo ay Dhibaatooyin ka Haystaan Xagga Dhaqaalaha – Rasaasa News
Jun 23, 2009 ethiopia, Ogaden
Waxaa dhawaan jiray Hydro-power Dam ay Ethiopia doonaysay inay samaysato iyadoo biyaha ka soo talaalaysa (leexsanaysa) wabiga Omo, laakiib wabigani wuxuu ku butaacaa oo uu biyo siiyaa harta Turkana (Lake Turkana). Sidoo kale Hartani waxaa ku xidhan quutul yawmka in ka badan 300,000 oo Kenyati ah, sidaa darted haddii biyaha Hartani isdhimaan, waxay saamayn xajmi weyn ku keeni nolosha dadkaa.
Waxay yidhaahdaan Wabigan (Oma), wuxuu Harta Turkana siiyaa (Supply) in ka badan 2 billion cubic meter oo biyo ah, sidaa darted 3 quarters waxaa qaadan doona mashruucan Damka ee looga gol leeyahay Power generationka.
Faa’iidada Damkan Ethiopia ugu jirta ama qorshaha ay ka leedahay waxa weeye in uu soo saaro in ka badan 1,870 Mega watts oo tamar ah, si ay EPRDF-tu uga baxdo dhibkan dhaqaale ee haystana waxay qorshaysatay inay 500 Mega Watts oo dabkaa ka mid ahna ka iibiso Kenya, 200 ilaa 300 ay ka iibiso Sudan.
Arinka wuxuu noqday khilaaf soo kala dhex gala labada dawladood (Ethiopia & Kenya), kolka malin dhawayd waxaa Nairobi ka soo ambabaxay guddi khaas ah oo loo xilsaaray inay kala hadlaan Ethiopia arinkan ama ATLEAST loo oggolaado inay Monitor gareeyaan mashruucan dhaqan-galintiisa & inaysan Ethiopia hawlo kale u isticmalain sida waraabka beeraha, EPRDF-tuse way ku gacan saydhay arinkan, guddigiina way noqdeen.
Arimahani waxay socdaanba waxaan manta arkayey Melez oo af labadii yeedhay kuna eedeeyey Bangiga adduunka & hay’aadka caalamiga ahiba inay masuul ka yihiin dhibkan cusub ee Ethiopia qabsaday ee ah in Korornto la’aantu ay imika noqoto maalin dhaaf. (Ethiopian Prime Minister Meles Zenawi said the World Bank and international donors share the blame for nationwide power cuts that led the government to trim its economic growth forecast.).
Waddankani wuxuu leeyahay the 2nd larghets population in Africa, sidaa darted waxaan is waydiinayaa dhibkan saamayn intee le’eg ayuu ku keeni.
Eedayntan melez waxaa si kulul uga jawaabay ninkan ““The notion that because we didn’t finance power they have a problem, that’s bogus,” Kenichi Ohashi, the World Bank’s director for Ethiopia, said by phone today. “If we financed power that would come at the expense of something else”
Waxaa sidoo kale qayb ka ah dhibka Ethiopia manta haysta soo sarakii & dhoofintii Bunka oo 30% hoos u dhacday “
Ciddii ref. doonaysa http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601116&sid=a_OByJb5XtpI
Intani waa uun qaybo ka mid ah dhibka Ethiopia haysta, labada su’aal aan is waydiinayo ayaa ah
1-EPRDF can pull out 60 million dollars in a second to spend on Washington lobbiests but not for power generation IYO
“ Waddan dhibaatooyinkani ay haystaan maamulkii Bush mid ka duwanina imika Washington ka jiro, side bay u oofin karaaan Codsigii Madaxweyne Shariif ee uu hiilka u waydiistay Ethiopia”